Easy lagu dooxi Music ka iPhone on Mac
> Resource > Music > Rip Music ka iPhone on Mac
"Ma jiraa qof ku gartaan si loo dooxi music ka iPhone 6S. Baan u soo bixi songs qaar ka mid ah xor ka Internet via iPhone, haddase ma aha waxaan iyaga ka bixi karin in Lugood Library, ama in computer sidoo kale. Baryayaaye, i sii qaar ka mid ah talooyin ama talo. Thanks! "
Waa arrin madax u leedahay in songs xayiran iPhone oo aan dooxi karaa heeso ka iPhone in Lugood Library ama computer. Haddii aad doonayso in aad dooxi music ka iPhone la Lugood, waxaan ahay waana hubaa aad ku socoto in ay ku fashilmaan, maxaa yeelay Lugood waxba ma samayn karno. Lugood waa hal hab qalab - syncs music ka Lugood si iPhone, laakiin ma dooxi karaa music ka iPhone. Xaaladdan oo kale, si ay u dooxi music ka iPhone, waa in aad isticmaasho xirfadle iPhone Ripper, sida Wondershare TunesGo. Info Tani soo socda waxay ku saabsan tahay sida loo dooxi music ka iPhone la Wondershare TunesGo . Akhri si aad u barato wixii faahfaahin ah.
Tallaabada 1. Ku rakib iPhone Ripper
Download iyo rakibi Ripper iPhone on your computer. Labada Wondershare TunesGo (Win) iyo TunesGo (Mac) ayaa laga heli karaa. Waxyaabaha soo socda ayaa, inaan qaato version Mac sida tusaale in ay kuu sheegaan sida loo dooxi music ka iPhone on Mac. Dadka isticmaala Windows, isku day in aad naftaada ama akhri TunesGo (Win) hage user .
Tallaabada 2. Connect iPhone la Mac
Isticmaal cable USB in iPhone yimaado leh in ay ku xidhmaan iPhone aad MacBook Pro, MacBook Air, ama iMac ah. Hadda TunesGo si fiican u la shaqeeya Mac wax socda ee Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10,10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6. Iyo TunesGo hadda taageeraa dhamaan noocyada iPhone, oo ay ku jiraan iPhone 6S (Plus), iPhone 6 (Plus), iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 5s, iPhone 4. In badan oo ku saabsan qalabka taageeray bartaan, fadlan riix halkan.
Tallaabada 3. Rip music ka iPhone on Mac
Burcad ripper ah music iPhone - TunesGo (Mac) on your Mac oo isla markiiba aqoonsan doonaa iPhone, bandhigeen aad iPhone uu furmo suuqa ugu weyn. Laga soo bilaabo uu furmo suuqa ugu weyn, waxaad arki kartaa in dhammaan warbaahinta files waxaa lagu kala soocaa galay qaybaha: Music, Podcasts, Lugood U, buugaag, Voice Deymaha maqan, Movies, Podcasts, Lugood U, TV muujinaysaa, iyo Photos.
Riix Music bidixda ee suuqa ugu waxyooda daaqad cusub. Laga soo bilaabo suuqa kala cusub, dhinaca midig, waxaad arki kartaa dhammaan faylasha hoos noocan ah. Ka dibna waxaad dooran kartaa heeso in aad rabto in aad dooxi oo guji "Dhoofinta 'ama' dhoofinta in Lugood 'laga bilaabi karo habka dooxeen ah.
In mid ka mid ah wareegto ku dhacay, aad arki doonaa music aad si guul dooxay ka iPhone in aad Lugood Library ama Mac. Bal eeg, siday u fududahay in dooxi music ka iPhone la Wondershare TunesGo (Mac). Ka sokow taas, waxa jira dhawr muuqaalada socodyada waad isticmaali kartaa full of isagoo nolol sahlan mobile. Waa maxay sababta aan kala soo bixi iPhone Music Ripper - Wondershare TunesGo in ay isku day ah oo iskaa?